UMessi ‘ufanelwe ukuwina iBallon d'Or minyaka yonke’ | News24
UMessi ‘ufanelwe ukuwina iBallon d'Or minyaka yonke’
Barcelona – Isikhwishikhwishi somdlali weBarcelona, uLionel Messi, kufanele awine indondo yomdlali ovelele emhlabeni, iBallon d'Or, minyaka yonke.
Lona ngumbono kaMengameli weBarcelona, uJosep Maria Bartomeu, kulandela ukukhala ngaphansi kukaMessi ekuwineni le ndondo njengoba esanda kubhinciselwa nxanye yimbangi yakhe enkulu yeReal Madrid, uCristiano Ronaldo.
OLUNYE UDABA: Kubhekwe uRonaldo ngendondo yomdlali ovelele emhlabeni
“IBallon d'Or kumele kube ekaMessi minyaka yonke njengoba engumdlali ovelele emlandweni webhola.
“Bakhona abanye abadlali abahle kodwa uMessi akungatshazwa ukuthi uhamba phambili,” kusho uBartomeu ngoLwesibili.
URonaldo uhlwithe le ndondo yomdlali ovelele emhlabeni jikelele okwesine ngaphambilini kule nyanga, nalapho ehlule khona imbangi yakhe yeminyaka, uMessi, yena oseyiwine izikhathi ezinhlanu.
Lesi sinqumo sokuthi kuwiniswe uRonaldo sashiya kunemibuzo eminingi evela eqenjini iBarcelona, ikakhulukazi ngemuva komdlalo osezingeni eliphezulu kaMessi ngesikhathi bebhaxabula omakhelwane, i-Espanyol ngo-4-1, emdlalweni womkhaya.
Kodwa-ke uRonaldo wanqoba ngemuva kokusiza iReal Madrid ukuthi inqobe iChampions League waphinde wahola neqembu lakhe lesizwe, iPortugal, ukuba inqobe i-Euro 2016.
Eminyakeni eyedlule iBallon d'Or bekulokhu kushintshwana ngayo phakathi kukaMessi kanye noRonaldo ngemuva kokuthi yawinwa yintandokazi yomdlali waseBrazil, uKaka.